समाज « Pathibhar Online
नारायण अधिकारी, मलेसियाबाट धेरै कमाउने र परिवारलाई सुखका साथ पाल्ने सपना बोकेर मलेसिया आइपुगेका नेपाली कामदारमध्ये दैनिक एक जनाको अकालमै ज्यान जाने गरेका छ । आत्महत्या, सडक दुर्घटना, कारखाना दुर्घटना,
ब्याज तिर्न ७ बर्ष हलिया बसेका अपाङ्ग दम्पती बाँच्नका लागि हारगुहार, खाना सहयोगको माग
भीमदत्तनगर । कमैयाबाट मुक्त ४० वर्षीय अपाङ्गता भएका रामबहादुर चौधरी २०५० को दशकमा साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजस्वरुप झण्डै सात वर्ष हलिया बस्न बाध्य हुनुभयो । बुबा विसरामले साहुबाट लिएको रु
वेश्या पुरुष छाती खोलेर हिँड्ने, महिलाले मुख लुकाउने, किन ?
काठमाडौं विगतका हरेक आन्दोलनमा नारीहरुको सहभागिता, अदम्य साहस र बलिदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा भइरह्यो । खासगरी राजनीतिक दलहरुले नारी हक, अधिकार र पूर्ण सुरक्षाको निम्ति संघर्ष गर्छौं भन्दै आश्वासन दिइरहे ।
कांग्रेस नेता प्रकाशमानको निवासमा पौडेल पक्षको गुटभेला
काठमाडौं प्रस्तावित नयाँ विधानका अन्तरवस्तुमा विवाद भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाइतरका नेताहरूको बैठक बसेको छ। आइतबार बिहान नेता प्रकाशमान सिंहको ठमेलस्थित निवासमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय नेताहरू भेला
प्रचण्ड पत्नी सितालाई लागेको रहेछ कहिल्यै सञ्चो नहुने यस्तो रोग !
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो पत्नीको उपचारको लागि विभिन्न ठाउँमा पुगिरहने गर्छन्। धेरै समय देखि बिरामी भन्दै खबरहरु आइरहने भएता पनि प्रचण्ड पत्नीलाई के
मिटरमा नजाने ३२ ट्याक्सीलाई कारवाही
काठमाडौँ, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ३२ ट्याक्सीलाई कारवाही गरेको छ । महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न बहाना बनाई मिटरमा जान नमान्ने, मिटरमा उठेको भन्दा बढी भाडा लिने ट्याक्सीलाई मङ्सिर
आमा भन्छिन्ः कुखुरा जुध्दा पनि मेरो छोरो परदेशबाट आइपुग्यो झैं लाग्छ भिडियो सहित
काठमाडौं- रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट मोटरसाइकलमा झण्डै तीनघण्टाको बाटो उत्तरमा पर्छ रस्नालु । मन्थलीमा गर्मीले बसिनसक्नु बनाइरहँदा रस्नालुमा भनें चिसो छ । रामबहादुर कार्कीको घर खोज्दै हामी पुग्दा उनकी श्रीमति सरस्वती
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धी श्रृङखलाको सपना !
काठमाडौं । आफ्नो देशलाई विश्वमाझ चिनाउने गरी मिस वल्र्डमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी नेपाली चेली श्रृङखला खतिवडाले प्रस्तुत गरेको भिडियो हो, यो । अहिले मिस वल्र्ड प्रतिस्पर्धी श्रृङ्खलासँगै उनले आफ्नो परिचयमा देशको
काठमाडाैँ । वर्तमान सरकारको चर्को अालोचना गर्नेहरूले पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको व्यक्तिगत रूपमा अालोचना गर्दैनन् । धेरै प्रचार नचाहने तर अाफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बानी भएका
अब अनलाइनबाटै लिनुस वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति ! दलालबाट जोगिनुस
काठमाडौं बैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत सबै काम अनलाइनबाटै गराउने तरखरमा रहेको बैदेशिक रोजगार बिभागले केहि समय अघिदेखि ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने र श्रमको नवीकरण गर्न समेत अनलाइनबाटै गर्ने सुविधा दिँदै आएको